Shabaab oo u kala jabay laba garab, kadib khilaaf ba’an oo hareeyay kooxda – Radio Muqdisho
Shabaab oo u kala jabay laba garab, kadib khilaaf ba’an oo hareeyay kooxda
Maleeshiyaadka Shabaab ayaa lagu soo waramayaa in uu hareeyay khilaaf ba’an oo sababay iney kooxdu laba garab u kala jabaan.
Warar isa soo taraya oo an ka helnay ilo xog ogaal ah ayaa muujinaya in kooxda uu dhex maray khilaafkii ugu adkaa ee soo mara abid, kaasoo sababay iney kooxdu laba garab oo aad u hubeysan ay u kala jabaan.
Labada dhinac ee kooxdu u kala jabtay ayaa waxaa kala hoggaaminaya Axmed Diiriye oo ah horjoogaha kooxda, kaasoo isagu aaminsan in kooxdu ku biirto ururka Daacish, iyo dhinaca kale oo ay hoggaaminayaan horjoogayaal lagu kala magacaabo Mahad Karatay iyo Cumar Mataan oo iyagu diddan in kooxdu ku biirto Daacish.
Horjoogayaasha kooxda ayaa isku khilaafay in kooxda lagu biiriyo Daacish iyo kale, Khilafkan oo soo jiitamayay in muddo ah, ayaa hadda isu bedelay gacan ka hadal, waxaana laba habeen ka hor labada dhinac uu dagaal ku dhex maray tuulada Tooratooroow ee gobolka Sh/Hoose.
Magaalada Jilibna maleeshiyaadka Labada dhinac ayaa la sheegay iney xalay dhufeys isu galeen, ayna qarka u saaranyihiin ineey dagaalamaan, waxaana warku intaasi ku darayaa iney labada dhinac kala fadhiyaan laba xaafadood, isla markaana aysan isu gudbi Karin, taasina waxey qal qal ku abuurtay dadka rayidka ah ee deggan magaaladaasi.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in horjoogaha ugu sarreeya kooxda ee lagu magacaabo Axmed Diiriye uu muddooyinkii ugu dambeeyay ku qalqaalinayay horjoogayaasha kale iney la qaataan fikirkaasi ,hase ahaatee labada horjooge oo iyagu aad ugu firfircoon maleeshiyaadka ayaa ka horyimid. Fikirkaasi.
Horjoogaha kooxda Axmed Diiriye ayaa markii uu ku hungoobay inuu horjoogayaasha kale ka dhaadhiciyo fikirkiisa, waxaa uu la xiriiray horjoogaha gooni u daaqa noqday ee lagu magacaabo Muqtaar Rooboow, isagoo ugu yeeray in uu dhex dhexaadiyo labada dhinac hase yeeshee horjooge Rooboow waa uu ku gacan seyray dalabka Axmed Diiriye.
Khilaafka u dhaxeeya kooxda ayaa la filayaa in uu circa isku sii shareero oo uu gaaro heer kala tag ah, maadaama aysan jirin cid laga sugayo ineey dhex dhexaadiso.